Burcad badeed qabsatay Markab Algeria laga leeyahay - BBC Somali
Burcad badeed qabsatay Markab Algeria laga leeyahay
3 Jannaayo 2011
Sida ay qortay wakaalad warar oo gaar loo leeyahay dalka Ukrain, ayaa burcad-badeed Soomaali ah waxay qabsadeen markab sita calanka dalka Algeria.
Waxaa markabkab laga qabsaday 1-dii bisha January ganacnka cadmeed.
Markabka ayaa ka soo kicitimay dekedda Salalah ee dalka Cumaan, iyadoo uu ku sii jeeday Dar es Salaam, dalka Tanzania, wuxuuna sidaa mid ka mid ah noocyada shamiitada.
Waxaa la qabsaday markabkan iyadoo uu marayo meel ilaa 150 mile oo dhinaca badda ah koonfurta bari ka xigta dekedda Salalah uu ku beegan gacanka cadmeed, sidaasna waxaa ku waramay wargayska wararka badaha ee Morskoy ulleten-Sovfrakht.
Waxaa markabku uu u diiwaangashan yahay xarunta amniga badaha ee geeska africa.
Ilaa 27 shaqaale ah ayaa saaran oo u kala dhashay Algeria, Ukrain iyo Philippines, balse sida ay tiro ahaan dalalkaas ugu kala dhasheen ma cadda.
Markabka oo la yiraahdo Bilda, waxaa la dhisay sanadkii 1978, wuxuuna qaadaa ilaa 20,586, waxaana iska leh shirkad Algerian ah.
Wuxuu markabkan noqonayaa kii labaad ee ay afduubaan burcad badeed Soomaali ah, iyadoo uu ka horeeyay markab ay burcaddu qabsatay 31-kii December markab sitay calanka dalka Mozambique oo ahaa markab kalluumaysi oo laga qafaashay meel ilaa 200 oo mile koonfur galbeed ka xigta jasiiradaha Comoros ee badwaynta India.
Waxaa markabkan saarnaa ilaa 14 shaqaale ah oo aan la garanaynin dhalashadooda, waxaana uu jiidayay wax loo qaatay in ay ahayd doontii ay burcaddu wadatay ka hor intii aysan markabka qabsan.
Burcad badeedda Soomaalida ah ayaa dhowr iyo labaatan markab hadda gacanta ku haya iyo ilaa 360 shaqaalihii maraakiibtaas ah.